हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति आफ्नो वाहन सधैं राम्रो-groomed र सफा हेर्न भनेर सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ। यो परिणाम हासिल गर्न अनुमति दिन्छ आधुनिक चमकाने यौगिकों। छैन त लामो अघि स्टोर मात्र शास्त्रीय हालतमा थिए। तर आज वृद्धि लोकप्रियता को पलिश तरल ग्लास जित्यो।
पलिश तरल ग्लास विशेष alkaline संरचना प्रयोग गरिन्छ। यो मोम सोडियम सिलिकेट वा पोटासियम प्रयोग उत्पादित छ। सामाग्री निर्माण सोडा संग क्वार्ट्ज बालुवा को फ्युजन गरेर पूरा गरिएको छ। यो उपचार, संरचना मा एक गुणवत्ता को परिणाम र एकै समयमा सुरक्षित वाहन गर्न चमक बहाल गर्न डिजाइन गरिएको उत्पादन मा।
के तपाईं आवश्यक
तरल ग्लास पलिश वाहन को तयारी आवश्यक छ। तर, यस्तो काम अघि प्याकेजिङ्ग Polishes जाँच गर्न सिफारिस गरिएको छ। सँगै निम्न उपकरण बेच्न गर्न हालतमा संग:
आधार संरचना र उपचार एजेन्ट;
घटक समस्या बिना मिश्रित गर्न सकिन्छ जो विंदुक,;
हात चमकाने लागि डिजाइन विशेष फाइबर;
उत्पादन एक उपकरण गर्छ भने, यो अलग यसलाई किन्न सिफारिस गरिएको छ। अन्यथा, ध्यान दिएर पोलिस शरीर काम गर्ने छैन।
स्वत: तरल ग्लास पलिश सफल छ, यो शरीर राम्रो तयारी गर्न आवश्यक छ। सुरु गर्नका लागि:
राम्ररी कार, सबै माटो, धूलो र कीराहरू हटाउने धुन।
शरीर को सतह राम्रो degreased हुनुपर्छ। यी उद्देश्यका लागि, यो सेतो आत्मा पहिले शुद्ध पानी मा भंग प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो आवश्यक छैन degreasing एजेन्ट, कम-ग्रेड अल्कोहल वा सिलिकन को संरचना मा उपस्थित छन् जो प्रयोग गर्न छ। उपचार पछि, तपाईं कार सुक्खामा आवश्यक छ।
पानी ग्लास शरीर को आवेदन गर्न पूर्व पलिश ढाकिएको थियो भने, यो पूर्ण हटाउन पर्छ। अन्यथा, नयाँ कोटिंग शरीर सतह मा धेरै खराब छडी छ। यो एकदम यसको आयु कम गर्नेछ।
जहाँ पलिश खर्च गर्न
पलिश तरल गिलास एक कार एक सानो मंच मा बाहिर हुनुपर्छ। ठाउँ राम्ररी ventilated, शुष्क हुन छ। जब हावा तापमान शून्य माथि 10-40 ° C हुनुपर्छ। विशेषज्ञहरु ग्यारेज मा शरीर पलिश सिफारिस गर्छौँ। प्रक्रिया सडक मा गरिनेछ भने, कार SHED राख्न आवश्यक छ।
शरीर सतह एक विशेष संरचना लागू गर्दा कार धुलो, धुलो र प्रत्यक्ष घाम उजागर गर्न हुँदैन।
के विचार लायक छ
शरीर को पलिश तरल गिलास कार को - पर्याप्त समय-खपत प्रक्रिया। तपाईं व्यापार मा नयाँ हो भने, यो मूल्य केही सरल नियमहरू विचार छ। सबै को पहिलो, एक विशेष संरचना सीधा सम्पूर्ण शरीर मा लागू छैन। यो पहिलो सानो टुक्रा कवर गर्नुपर्छ। यो वाहन को सतह आसन्न छ तरल ग्लास कसरी आकलन हुनेछ। तपाईं अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं सुरक्षित सारा कार पोलिस गर्न अगाडि बढ्न सक्छ।
यो उपाय शरीर बिस्तारै खण्ड द्वारा खण्ड प्रशोधन गर्न लागू हुनुपर्ने विचार लायक पनि छ। उदाहरणका लागि, तपाईं बम्पर र छत समाप्तिको साथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कार वस्तुको एक पूर्ण उपचार गरिनेछ जब तपाईं अर्को चमकाने गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। यस्तो दृष्टिकोण दुई कारण आवश्यक छ। शरीर प्रक्रिया थप कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गरिनेछ भएकोले। साथै, पलिश रूपमा चाँडै बाहिर सूखी छैन।
लागू waterglass रूपमा
पलिश तरल ग्लास विशेष संरचना को तयारी सुरु गर्नुपर्छ। तपाईं मिश्रण ध्यान निर्देशनहरू पढ्नुहोस् र यसलाई भन्छ रूपमा सबै गर्नुपर्छ सुरु अघि। अन्यथा पलिश घटिया प्राप्त। को संरचना तयार छ, यो शरीर को सतह आफ्नो आवेदन गर्न अगाडि बढ्न सम्भव छ। एकै समयमा हामी धेरै ध्यान दिएर कार्य गर्नुपर्छ।
शरीर को कुनै पनि भाग मा पलिश को एक सानो राशि लागू गर्नुपर्छ, र त्यसपछि एक नरम कपडा, समावेश गर्नुपर्छ जो संग सबै पीसने। यो काम पूरा मा सतह धूलो उजागर छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो पूरै सम्पूर्ण शरीर द्वारा प्रशोधन गर्दा, तपाईं वाहन छ घण्टा एक्लै छोड्न पर्छ। कोटिंग एक बिट बाहिर सूखी गर्नुपर्छ।
यो waterglass पूरा solidification 14 दिन आवेदन पछि पछि ठाउँ लिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो समयमा, विशेष गरी कार धुने मा, कार को शरीर धुन सिफारिस गरिएको छैन। निर्धारित समय पछि मिसिन सतह पूर्ण चिस्यान, घाम, लवण, र अन्य समस्याहरूको सुरक्षित गरिनेछ।
प्रक्रिया गति सम्भव छ गर्न
समय तरल ग्लास कति पलिश लिन्छ? कार मालिक को समीक्षा पूर्ण शरीर उपचार प्रक्रिया एक गुण प्रदर्शन बारेमा6घन्टा लाग्छ भनेर संकेत गर्छ। यति धेरै मानिसहरू लामो खडा गर्न सक्दैन। त्यसैले प्रश्न यो चमकाने प्रक्रिया गति गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर उठ्छ? यस्तो मिसिन पीस रूपमा प्रयोग अतिरिक्त उपकरण, सरल बनाउन काम को एक धेरै। यस मामला मा, चमकाने एक नरम चमकाने प्याड चयन गर्नुपर्छ। आवेदन मात्र मध्यम गति मा तरल ग्लास बनेको छ। Grinder मा थप प्रयासको पलिश लागि सिफारिस गरिएको छैन। अन्यथा, सतह गरम करना गर्न थाल्छ।
उपलब्ध छैन पीस भने, यो सुसज्जित पलिश लागि पाङ्ग्रा फिक्सिंग को लागि एक विशेष संलग्न भएको बिजुली ड्रिल सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कति यो लागत हुनेछ
आफ्नो हातले तरल ग्लास पलिश को शोरूम मा पलिश भन्दा धेरै सस्ता छ। यसलाई उच्च गुणस्तरीय उपकरण को मूल्य 3-6 हजार लिफ्ट छ कि टिप्पण लायक छ। निस्सन्देह, लागत पारंपरिक Polishes waterglass एकदम उच्च छ। तर, यो कोटिंग धेरै लामो रहन्छ। तरल ग्लास को आवेदन विशेष उपकरण वा विशेष सीप प्रयोग आवश्यकता छैन। र यो, बारी मा, तपाईं सुरक्षित गर्न अनुमति दिन्छ।
तरल ग्लास पलिश पछि शरीर चिल्लो र सही कोटिंग गठन गरिएको छ। वाहन थप राम्ररी groomed उपस्थिति बन्ने छ। आवश्यक छ भने, यस्तो कोटिंग अद्यावधिक गर्न सकिँदैन। यो पानी ग्लास एक वर्षको लागि शरीर को सतह मा आयोजित गरिन्छ कि टिप्पण लायक छ। यो कोटिंग मा 50 भ्रमणमा विशेष carwashes सम्म सामना गर्न सक्छन्। साथै, शरीर को हेरविचार लागि मात्र सफा थाड़्ना र पानी बोतल आवश्यक छ।
घर मा तरल ग्लास पलिश - यो वास्तविक हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - सबै आवश्यक उपकरण र धैर्य मा शेयर। तपाईं त काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
निदान कार कार्ड को वैधता
Razdatka, "शेवरलेट Niva": उपकरणको प्राविधिक सुविधाहरू
कहानी फिनल्याण्ड। लाटी - स्कैनडिनेविया को खेलकुद र सांस्कृतिक केन्द्र
को "BIOS" कसरी अपडेट गर्न